Shaqada & Ganacsiga | Somaliska - Part 2
Shilimaadkaan isticmaalkeeda bisha Juun ayaa u dambaysa
Dhamaadka bishaan Juun ayaa u dambaysa isticmaalka shilimaadka hore ee 1- karoon iyo 5- karoon. Ugu dambeyn 30-jun ayaa lacagaha hore ee qiimahooda yahay 1 iyo 5 karoon isticmaalkooda la joojin doonaa. 31 Ogosto 2017:...
Maamulka degmoyinka iyo goboladda dalka Iswiidhan ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SKL, ayaa doonaya in wax laga badalo nidaamkii hore ee gunnadda loogu siin jirtay soo galootiga cusub gaar ahaan dhalinyaradda. Maamulka...
Soomaalida ku dhaqan dalkaan Iswiidhan gaar ahaan magaaladda Borlänge, ayaa bilaabay talaabo ay ku doonayaan ama ay uga qeyb qaadanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya oo hadda u muuqda mid ka soo kabanaya dagaal...
Tartan xagga gabayada ah oo lugu qabtay magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan ayaa waxaa kaalinta koowaad galay Liibaan Cabdulle oo ah 20 jir u dhashay dalka Soomaaliya. Tartankan oo loo qabtay magaalooyinka waa weeyn...
Dadka dalkaan ku cusub ayaa dhinaca xagga la jaanqaadista nolosha waxaa ay ku talaabsadeen horumar baaxad leh oo la tilaami karro sida uu sheegayo suuqa shaqada oo soo bandhigay tirro koob aad u sareeya. Shirkada...
Gabadha lugu magacaabo Amaal Cali oo ah gabar asalkeedu soomaali yahay, kuna nool dalka Noorwaay, ayaa caan ku aheyd sumcad dilka soomaalida dalkaasi. Maqaal ay dhawaan ku daabacday wargeyska Dagbaladet ee ka soo baxa dalkaasi,...
Hey’adda hanti dhowrka oo eedeysay suuqa shaqadda
Suuqa shaqada ee loo yaqaano Arbetsförmedlingen-ka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano (AF), ayaa waxaa dhaleeceeyn u soo jeediyey hey’adda hanti dhowrka ee dalkaani Iswiidhan. Hey’addan ayaa u kuurigalid ay sameeysay waxaa ay ku...
Iyadoo ay aad u sarayso heerka shaqo la’aanta ee dumarka Soomaalida ah ee Sweden ku nool, ayaa mashruuc laga sameeyay beer ku dhow magaalada Linköping waxaa haweenka Soomaalida laga siiyay shaqo ay beeraha ku falaan....
Xisbiga Kristdemokraterna ayaa doonaya in ay shuruudaha ku sii atkeeyaan magangalyadoonka Sweden sharci ka codsada. KD ayaa doonaya in dadka shaqo loo diro inta ay jawaabta sharciga sugayaan, hadii ay diidaan ayaa laga jarayaa lacagaha ay ka helaan...
Gabadha lagu magacaabo Banin Maki ayaa bishii hore waxay shaqo ka raadsatay maqaaxida Subway, iyadoo loogu wacay wareysi. Ka dib markii ay soo xaadirtay wareysiga oo ay aad ugu faraxday ayaa loo sheegay in aysan...
Haddii aad tahay qaxooti, labadaan arimoood ayaa kaa hor-taagan in aad shaqo ka hesho Sweden
Baaritaan lagu sameeyay dhibaatooyinka ka hor-taagan qaxootiga Sweden ku nool in ay soo galaan suuqa shaqada ayaa la soo bandhigay. Baaritaankaan oo ay ka qeyb qaateen madaxda shirkadaha adeega bixiya sida nadaafada, caafimaadka, gaadiidka...
Sida aan wada ognahay way adagtahay in shaqo laga helo Sweden, qaasatan haddii aad tahay qof soo galooti ah oo aanan aqoon dad badan. Shaqooyinka inta badan ayaa lagu helaa inta qof aad taqaano,...